माइग्रेन के हो ? - स्वास्थ्य - प्रकाशितः श्रावण १९, २०७६ - नारी
आधा टाउको दुख्ने, बेला–बेलामा बेस्सरी टाउको दुख्ने, कन्चट दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने आदि समस्या भए माइग्रेन भएको मानिन्छ । यस्ता समस्या भएकालाई घाम तथा भीडभाडमा जाँदा टाउको दुख्ने, रिस उठ्ने तथा झर्को लाग्ने हुन्छ । खाली पेट हुँदा, व्रत बस्दा एवं राम्रोसँग निद्रा नलाग्दा टाउको दुख्न सक्छ । तनाव तथा चिन्ताका कारण पनि टाउको दुख्छ । अध्ययनअनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाको टाउको बढी दुख्छ ।
टाउको दुख्ने समस्यालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
१.प्राइमरी टाउको दुखाइ, २. सेकेन्डरी टाउको दुखाइ ।
प्राइमरी टाउको दुखाइ
यसअन्तर्गत माइग्रेन, टेन्सन टाइप तथा क्लस्टर पर्छन् । हार्मोनको सन्तुलन नहुनु तथा रक्तसंचालनमा गडबडी एवं तनाव नै टाउको दुखाइको मुख्य कारण हो ।
सेकेन्डरी टाउको दुखाइ
कुनै रोगका कारण टाउको दुख्नु नै सेकेन्डरी टाउको दुखाइ हो । कान, आँखा तथा दाँतको संक्रमणमा पनि टाउको दुख्न सक्छ । ट्युमरका कारण टाउको दुख्न सक्छ । रक्तचाप कम वा बढी हुँदा वा मधुमेहका कारण पनि बढी टाउको दुख्न सक्छ ।
 माइग्रेन बढाउने तत्व एवं खानपिन पत्ता लगाई त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
 गुन्द्रुक, सिन्की, तामा तथा बोतलमा राखिएका पुराना अचार खानुहुँदैन ।
 दही, पनिर, आइसक्रिम, कफी, चकलेट आदि खानु हुँदैन ।
 कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, वाइन तथा रक्सीको सेवनका साथै धूम्रपान गर्नुहुँदैन ।
 उज्यालो, भीडभाड एवं कोलाहलबाट टाढै बस्नुपर्छ ।
 बढी गर्मी तथा चिसोबाट जोगिनुपर्छ ।
 खाली पेट बस्नुहुँदैन, फलफूल खानुका साथै प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ ।
 तनाव तथा चिन्तारहित रहनुपर्छ । कुनै काममा व्यस्त हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
 योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि ६ देखि ८ घन्टा आरामले सुत्नुपर्छ ।
 निरन्तर मोबाइल तथा टिभी हेर्नुहुँदैन ।
माइग्रेन थेरापी : यसमा विभिन्न चिकित्सा पर्छन् । स्काल्प अकुपञ्चरबाट टाउको दुख्न कम हुन्छ । टाउकोमा अकुपञ्चरका सिरिन्ज राखेर यो उपचार सम्पन्न गरिन्छ ।
मसाज : शिरोधारासँगै टाउकाको मसाज गरिन्छ ।
ध्यान : ध्यानबाट पनि टाउको दुख्न कम हुन्छ ।
आयुर्वेदीय औषधि तथा सप्लिमेन्टको प्रयोगबाट पनि टाउको दुख्न कम गर्न सकिन्छ । यसबाट दुई–तीन हप्तामा टाउको दुख्न कम हुँदै जान्छ ।
मेडिकल अकुपंचरिस्ट सफल हेल्थ होम